Hlunga Igobolondo - Sffiltech
Ikhaya » Imikhiqizo » Ukuhlunga kotshwala » Isihlungi seCartridge
Ama-cartridge wokuhlunga we-PP ancengelwe
Incazelo:Ama-cartridge wehlunga we-LPPF akhiwa nge-multilayer polypropylene, enamanani wokugeleza aphezulu, ukuhambisana kwamakhemikhali obanzi namandla aphezulu okubamba. Lezihlungi zilungele ukususa izinto ezingcolisayo nezinambuzane ezingena ekuhlanzeni kokugonywa.
Ama-cartridge we-carbon fiber wokuhlunga ocashile
Incazelo:Ama-cartridge wehlunga we-LFC akhiqizwa kusuka kuzinto ezenziwe nge-carbon fiber kanye nezinto ezisetshenziswayo ze-polypropylene, zenzelwe ukucaciswa kabusha, ukufakelwa kwamadimoni kanye ne-adsorption engafuneki, ikakhulukazi ezintweni ezikhipha i-oxidizing nokususwa kokungcola kwendalo embonini yamanzi asebhodleleni. Banganikezela ngamanani wokugeleza okuphezulu kumazinga aphansi okucindezela, ukukhipha izinto ezingenabo ubuthi kanye nokusebenziseka kalula. Ngaphezu kwalokho, zingcono kwezomnotho kuma-cartridge we-granular activated carbon.
Ama-cartridge we-glass fiber wokuhlunga
Incazelo:Onke amakhasethi wokuhlunga we-fluoropolymer akhiwe nge-membrane ye-hydrophilic PTFE nezakhi ze-PVDF, ezinikela ngokuphuma okuphezulu, amanani okuhamba okuphezulu nempilo ende yenkonzo. Ngenxa yezimpawu zabo zokuphikisana kwamakhemikhali nokuphikisana ne-oxidation, zilungele uhlelo lokuhlunga lwamanzi oxidised embonini yamanzi asebhodleleni.
Ama-cartridge we-Membrane ptfe wokuhlunga
Incazelo:Ama-cartridge we-LPTA wokuhlunga afakwa ngu-membrane we-PTFE unomphela, owenzelwe ngokukhethekile ukungena komoya oyinyumba nogesi wegesi ekwenzeni umkhiqizo wokugomela. Zingahlolwa ubuqotho, zinikela ukuphepha kwenqubo okuphezulu kakhulu, izindlela eziningi eziphakeme, umswakama obedlulele nokuqina okuqinile komugqa we-stamil line. Lokhu okuhlungayo kungabulala kakhulu ngokunambitheka impilo ende yenkonzo.
Ama-cartridge we-Membrane PVDF wokuhlunga
Incazelo:Ama-cartridge we-LPSL wokuhlunga aklanyelwe ngokukhethekile ukuhlunga kokuhlanzeka kwengxenye ye-plasma. Banokukhishwa okuphansi kakhulu okungekho ngaphezu kwe-10mg / 10 ”, impilo yenkonzo ende nemijikelezo engama-40 ye-SIP. Lokhu okuhlungayo kungaqinisekisa ngamandla ikhwalithi yokugcina yomkhiqizo.
Ama-cartridge we-Membrane MCE wokuhlunga
Incazelo:Ama-cartridge we-lemPuli wokuhlunga we-LPM abonakala ngokusebenza okuphezulu, i-hydrophilic exubile ye-cellulose esters membrane, enikeza amazinga okugeleza okuphezulu, i-adsorption ephansi yamaprotheni nokuphepha okuphakeme kwe-Microbiological. Lokhu okuhlungayo kwenzelwe ukunciphisa izindleko futhi kufaneleka kakhulu ekwakhekeni kokugoma.
Ama-cartridge we-Membrane nylon
Incazelo:Ukwakhiwa okugcwele insimbi ngokugcwele nokusebenza kokuhlunga okungadlule
Ukwakhiwa okuvikelwe ngokugcwele nge-Sffiltech filter bag seal seal kunikezela nge-100% yedlula
Indandatho yokuhlunga ye-Sffiltech yokucindezela eyenziwe isebenzisa ingcindezi inikezela ngesithonjana esivumelanayo, esimelana namakhemikhali esivumelana nanoma iyiphi indlu yokuhlala kwesihlungi
Izinto ezibonakalayo azinazo izinto ezakha i-silicone kanye ne-crater-form
Isethi yokushisa ekhethekile nokwelashwa komhlaba okuphezulu kunciphisa kakhulu ukuphuma kwe-fiber
Izinsimbi ezigobekile eziguqukayo neziguquguqukayo ezivumelana nobhasikidi we-restrainer
Ama-cartridge we-Membrane Pes wokuhlunga
Incazelo:I-Doctopfilter i-multi-cartridge ephezulu yokugeleza yokugeleza ephezulu isuka ebangeni lama-cartridge ama-9 ukuya kuma-cartridge angu-100, kanti ubude be-cartridge buyi-20 ", 30", 40 "， 50". Izinhlobo zezindlu zokuhlunga ze-cartridge ziyatholakala, zamukela ukushibilika okuyingqayizivele ngomsizi we-spring lid.
Izindlu zesihlungi seCartridge zikulungele ukufaka ngazo zombili izinhlangothi ezivulekile ezivulekileyo kanye negobolondo elilodwa elivulekile lama-222. I-Hooping ehlukile nokuklama kokuvula okusheshayo. Kulula ukuvula, ukuvala, ukuphatha nokugcina
Ama-cartridge we-filter eMeltblown
Incazelo:I-1.Three layers organic cartridge inikeza ukungcola okuphezulu kokuthwala umthamo, impilo ende yenkonzo
I-2.Fone nge-bond efudumele ngaphandle kokusebenzisa noma yibaphi abanamathela.
I-3.100% I-Polypropylene Engaxutshiwe ngeke idale ukungcoliswa kwamanzi
4.Wide Chemical ukuhambisana
5Groove design ukunwebeka indawo yokuhlunga engaphezulu
6. Zonke izinhlobo zama-adapt ziyatholakala.
I-cartridge yama-cartridge we-cartelges lemifanekiso
Ikhaya Previous 1 Olandelayo Last - Total 11 1 uloba page yamanje / obuphelele 1 20 ngekhasi ngalinye